Egburu mmadụ 26, ọtụtụ merụrụ ahụ na mwakpo ụgbọ ala Egypt
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Egypt » Egburu mmadụ 26, ọtụtụ merụrụ ahụ na mwakpo ụgbọ ala Egypt
Nwere ike 26, 2017
Ndị oji egbe amaghị ama ebusola bọs bu Ndị Kraịst Coptic bi na ndịda Egypt, na-ahapụ ọtụtụ ebumnuche.
Dị ka akụkọ mbụ si kwuo, ọ dịkarịa ala mmadụ 26, gụnyere ụmụaka, anwụwo na ihe karịrị mmadụ iri na abụọ merụrụ ahụ na mwakpo ahụ, nke mere na mpaghara ndịda Egypt nke dị na Egypt na Fraịdee.
Mwakpo a bịara mgbe mwakpo ụlọ ụka na Disemba na Eprel ndị otu Daesh kwuru na ha gburu ọtụtụ ndị ụka Kraist ndị Egypt. Islam eyi ọha egwu egwu ọzọ ọgụ megide Arab mba Christian nta.
Onye isi ochichi Minya, Essam al-Bedaiwy, kwuru na ndi otu a na-aga njem bọs abuo na gwongwo na ebe obibi ndi monastery di na Samuel Samuel mgbe ha biara agha.
Enweghị ikike ozugbo maka ọrụ maka mwakpo Friday.
Egypt Coptic Christian abụrụla ọgụ nke mwakpo ọtụtụ ndị na-eyi ọha egwu na ọnwa ndị gara aga.
Ogbunigwe abụọ gburu na Alexandria na Tanta gburu mmadụ karịrị iri anọ na ise n'ọnwa Eprel.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 30 nwụrụ na mwakpo ndị Daesh wakporo ụlọ ụka dị na isi obodo Cairo n'ọnwa Disemba.
Terroristtù ndị na-eyi ọha egwu Alakụba a hasụọla iyi na ha ga-aga n'ihu na-elekwasi ndị Kraịst anya, bụ ndị mejupụtara ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ iri nke ndị bi n'Ijipt karịrị nde iri itoolu na abụọ.
Administrationda Trump dọrọ aka ná ntị banyere "adighi ike ma ọ bụ dị ize ndụ ụgbọelu nche atumatu"
SKYPETS: Anu ulo na-efe elu site na Korean Air ohuru ugwo ohuru maka anu ulo
Oge okpomọkụ na Barbados ntinye akwụkwọ na-ekpo ọkụ